Anjanamasina – Minisiteran’ny Fitsarana: hofanina hiompy ireo zaza mania | NewsMada
Anjanamasina – Minisiteran’ny Fitsarana: hofanina hiompy ireo zaza mania
Fijerena ny ho avy rehefa tafaverina eny amin’ny fiarahamonina. Nomena fitaovana ho amin’ny fiompiana zanak’akoho fakana nofo ary hofanina momba izany ireo zaza nania eny amin’ny toby Anjanamasina. Natao, omaly ny fanolorana ny fitaovana sy ireo kojakoja ary ny akoho ho azy ireo. Miara-miasa amin’ity tetikasa ity ny eo anivon’ny minisiteran’ny Fitsarana sy ny “Groupe Eclosia”. Tanjona ny fanomanana azy ireo hiatrika ny fiainana sy hiverina eo anivon’ny fiarahamonina nefa koa tafiditra amin’ny ady atao tsy hamerenan’izy ireo heloka intsony izany.
Homena fiofanana izy ireo. Hahazo izany mialoha kosa ireo mpandraharaha ny fonja eny an-toerana amin’ny alalan’ny teknisianin’ny orinasa Eclosia. Samy hahafehy ny teknika samihafa momba izany izy ireo avy eo. Ankoatra ny akoho, eo koa ny fitaovana sy kojakoja samihafa hampihodinana izany fiompiana izany, toy ny provandy, ny vitamina…nomen’ny orinasa.
Tsiahivina fa anisan’ny tetikasan’ny minisitera ny hetsika, tahaka izao, eny anivon’ny fonja na ny toby fanarenana hijerena indrindra ny hoavin’ireny olona tazonina any ireny, rehefa miverina eo anivon’ny fiaraha-monina.